VaMnangagwa Vanonamatirwa naFather Moyo muBulawayo
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika, VaEmmerson Mangagwa, vanoti machechi anoita basa rakakosha munyika rekubatsira kuti vanhu vabatane uye vagare murunyararo.
Vachitaura kuvatenderi paHoly Trinity Catholic Church mumusha weCowdray Park muBulawayo neSvondo, VaMnangagwa vakati vakafara zvikuru kukwanisa kuwana mukana wekupinda svondo yeRoman Catholic, vachiti ndiyo chechi huru pamachechi echitendero chechiKristu pasi rose.
VaMnangagwa vakatiwo kunyange hazvo vakakurira muchechi yeMethodist ivo vanozviverenga pane vamwe vanhu vashoma vechitendero chechiKaturike nekuti gore rakapera vakawana mukana wekuenda kuVatican unove ndiwo muzinda wechechi iyi pasi rose.
Vakati vakave mumwe wevanhu vashoma vakakwanisa kupinda pamusiwo unonzi ‘Door of Mercy’ icho chinove chiitiko chechechi yechiKaturike chinoitwa mushure memakore makumi maviri nemashanu, vachiti kwavari izvi zvinoreva kuti ivo mumwe wevanhu vakawana nyasha dzekuregererwa zvitadzo zvavo.
VaMnangagwa vanoonekwa semumwe wevanhu vanogona kutsiva mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, pachinzvimbo ichi uye pachinzvimbo chekutungamira bato reZanu PF.
Asi vamwe vanoti VaMnangagwa havakodzeri kuve vanotungamira nyika nekuda kwekuti ndivo mumwe wevanhu vakave nechekuita neGukurahundi apo pakaurayiwa vanhu vanofungidzirwa kuti vanosvika zviuru makumi maviri mumatunhu eMidlands neMatabeleland.
VaMnangagwa vakati Mwari ndivo vega vanoziva zviri mumoyo nepfungwa dzevanhu, vachiti vanhu vashoma vangakwanisa kuzvipira kufira chitendero chavo sekuzvipira kwange kwakaita Jesu, vakatiwo vanhu vashoma vangakwanisa kuzvipira kurwira rusununguko rwenyika sekuzvipra kwakaita varwi vehondo yerusununguko.
Vakati hurumende inoziva kuti machechi anoita basa rakakosha rekukurudzira vanhu kuti vagare murudo nemurunyararo, vakakurudzirawo vanhu kuti vanyorese vagokwanisa kuvhota.
VaMnangagwa vakatora mukana uyu kupfugama pamberi paFather Gilbert Moyo veHoly Tinity Church, vachinamatirwa Father Moyo vakaisa maoko avo mumusoro maVaMnangagwa.
VaMnangagwa vakazove munyarikani pane chiitiko cheground breaking ceremony yekuvakwa kuchaitwa Cowdray Shopping Complex mumusha weCowdray Park mekare nemumwe muzvinabhizimisi wemuBulawayo, VaRaj Modi.
Chivakwa ichi chinotarisirwa kutanga kuvakwa muna Mbudzi uye chinotarisira kuvakwa nemamiriyoni gumi emadhora.
VaMnangagwa vakatenda VaModi nekusima mari yavo mune zvemabhizimisi munyika vakati hurumende iri kuedza nepose painogona kutsigira vemabhizimisi nekuvandudza mitemo yenyika kuitira kuti zvinhu zviitire nyore kune vanoda kusima mari yavo munyika.